Somali News 06.15.21 | KWIT
Somali News 06.15.21
By Person: Ifrah Mosman • Jun 16, 2021
Magaalada Sioux City waxay dadka ka codsaneysaa inay caawiyaan dadka hoy la’aanta ah iyagoo ugu deeqaya magaalada oo dhan macaash doon, halkii ay ka siin lahaayeen shaqsiyaadka. Magaalada ayaa saaka ku dhawaaqday inay dadka ka caawin doonto inay wax siiso si ay isbeddel dhab ah u sameeyaan markay wax ugu deeqaan degel cusub. Deeqaha waxaa lagu sameyn karaa www.siouxcityassist.org. Lacagta waxaa la siinayaa hay'adaha bixiya adeegyada iyo / ama hoyga. Calaamado ayaa la dhigi doonaa hareeraha magaalada Sioux City iyadoo lagu dhiirrigelinayo dadka inay booqdaan websaydhka halkii ay toos ugu deeqi lahaayeen shaqsiyaadka.
Ras Smith waa musharraxii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah ee ku dhawaaqa inuu u tartamayo xilka guddoomiyaha sannadka 2022.
Smith wuxuu sheegay inuu doonayo inuu hagaajiyo tayada nolosha iyo in si siman loola dhaqmo dhamaan dadka reer Iowans, iyadoo la xoojinayo shaqaalaha lana maalgalinayo bulshooyinka maxalliga ah.
Wakiilka saddexda jeer ee gobolka ee Waterloo ayaa maanta ku dhawaaqay dalabkiisa. Ujeeddadiisu waxay ahayd in guddoomiye Kim Reynolds wax ka qabto dhibaatada coronavirus.
Dimuqraadiyiinta kale, oo uu ku jiro hanti dhowrka gobolka Rob Sand, ayaa ka fiirsanaya inuu tartamo. Smith wuxuu galabnimadii si rasmi ah ololihiisa uga bilaabay Waterloo.
Guddi wada jir ah oo ka kooban kowntiga magaalada ayaa shalay aqbalay dalabkii ugu hooseeyay ee ku dhowaad $ 58.4 milyan oo ka yimid Hausmann Construction oo loogu tala galay Xarunta Fulinta Sharciga ee Gobolka Woodbury
Kulan ay yeesheen Maamulka Xarunta Sharciga Meelmarinta Sharciga, kooxdu waxay si aqlabiyad leh ku ansixiyeen dalabka Hausmann. Guddigu wuxuu horey ugu sii socday wajiga weyn ee dhismaha mashruuca inkasta oo dalabkiisu hooseeyo oo aan la hubin isticmaalka qaybta gobolka ee lacagaha gargaarka COVID si looga caawiyo daboolida qiimaha sare.
Somali News 06.14.21
By Person: Ifrah Mosman • Jun 15, 2021
Shirkad duulimaadka Omaha ah ayaa rajeyneysa inay xarun ka furato garoonka diyaaradaha ee magaalada Sioux City oo ay ku siiso tababar duulimaad xirfadeed halkaas. Oracle Aviation waxay qorsheyneysaa inay iskaashi la sameyso Jaamacadda Morningside si loo sameeyo barnaamij duulimaad oo la aqoonsan yahay, kaas oo bixin doona bachelor shahaadada sayniska ee la xiriira duulimaadyada.
Masuuliyiinta Maamulka Plymouth County ayaa baaraya dhacdo ku hareeraysan nin meydkiisa laga helay habeenimadii wadada weyn ee 75 oo woqooyiga ka xigta Hinton.